Darpan Nepal – यी ५ राशिका भएका केटाहरुले सधै पाउँछन् प्रेममा धोका !
यी ५ राशिका भएका केटाहरुले सधै पाउँछन् प्रेममा धोका !
May 10, 2018adminIntresting fact0Like
मेष राशि::यो राशिको मानिसहरूले सधै आफ्नो प्रेमिकालाई साँचो माया गर्छन्। तर भाग्यले उनीहरुबाट केही अरु नै आशा गर्दछ। विशेषगरी मेष राशिका केटाहरूले आफ्नो प्रेमिकालाई माया गर्छन्। तर उनीहरूलाई कदम कदममा धोका र अपमान भोग्नु पर्छ।
मिथुन राशि::यस राशिका पुरुषहरु सबै भन्दा बढी फ्रड (झुठा) हुन्छन्। उनीहरु आफ्नो प्रेमिकाको सबै साथीहरूसँग कुराकानी गर्छन्। तर उनीहरु जोसँग माया गर्छन् उनीहरुका लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन्। तर दुर्भाग्यवश, यस राशिको केटाहरुको प्रेमिकाले उनीहरुको जिस्किने बानीलाई मध्यनजर गरेर कहिले पनि यसलाई १०० प्रतिशत मनन गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण यस राशिका केटाहरुले प्रेममा धोका पाउँछन् ।
कन्या राशि:यस राशिकाका पुरुषहरुले तर्क (लोजिक) लाई धेरै मान्छन्। उनीहरु भावनात्मक विषयमा कमजोर हुन्छन्। जहिले पनि प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीले प्रेमिका र प्रेमिकाले प्रेमीलाई सानो भन्दा सानो कुराहरु शेयर गर्नु पर्छ । यदि कुनै कुरा लुकाईयो र पछि कारणबस आफ्नो कुरा फुस्कियो भने त्यसले सम्बन्धमा समस्या पैदा गरिदिन्छ। त्यसैले पनि सम्बन्ध तोडिने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।
धनु राशि:धनु राशिका मानिसहरूले एक्सन र रोमान्सलाई बढी मनपराउछन्। तर यी राशीका पुरुषहरू आफ्नो बेडरूम र आफ्नो प्रेमिकाको अगाडी कमजोर हुने गर्छन्। उनीहरू रोमान्सलाई त्यो स्तर सम्म पुर्याउन असफल हुन्छन्। जतिसम्म कि उनिहरुको प्रेमिकाले आशा गरेका हुन्छन्। यसका कारण, उनीहरूको पार्टनर असन्तुष्टी भएर तिनीहरूलाई धोका दिन्छन् ।
कुम्भ राशि:यस राशिका पुरुष जोशीला हुन्छन् र उनीहरू आफ्नै संसारमा हराएका हुन्छन्। अन्तमा, तिनीहरूका पार्टनरले तिनीहरूलाई छोड्छन्। उनीहरूले यी कुराहरू ठीक गर्न पनि प्रयास गर्दैनन्। तर त्यतिबेला यो ढिला भैसकेको हुन्छ ।
Previous Postघरमा दियो बाल्दा यो दिशामा बाल्नुहोस आयु बढ्छ Next Postमोदीको सुरक्षाकालागि भन्दै नेपाल छिरे अत्याधुनिक हतियार